आइएमई लाइफले ६० करोडको आइपीओ जारी गर्ने – Beema News
आइएमई लाइफले ६० करोडको आइपीओ जारी गर्ने
प्रकाशित मिति: २७ पुष २०७४, बिहीबार १०:३६
काठमाडौं । आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्सले आइपीओ जारी गर्ने भएको छ । कम्पनीको पहिलो बार्षिक साधारण सभाले ३० प्रतिशतले हुन आउने ६० करोडको आइपीओ जारी गर्ने प्रस्ताव पारित भएको हो ।
कम्पनीमा संस्थापक समूहको ७० प्रतिशत र सर्वसाधारण समूहको ३० प्रतिशत लगानी संरचना बनाउने गरी आइपीओ जारी गर्ने निर्णय गरेको कम्पनीले जनाएको छ । एक अर्ब ४० करोड चुक्तापुँजी र ३ अर्ब अधिकृत पुँजी रहेको छ । ६० करोडको आइपीओ जारी गरेपछि कम्पनीको चुक्तापूँजी दुई अर्ब रुपैयाँ पुग्नेछ ।
साधारण सभामा सञ्चालक समितिका अध्यक्ष डा. रामहरी अर्यालले प्रधान कार्यालय सहित देशभर ४० वटा शाखा कार्यालयहरु पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आएको र सबै शाखा कार्यालयहरुबाट ग्राहकहरुलाई सेवा प्रदान गर्दे आएको जानकारी दिनुभयो ।
वार्षिक साधारण सभाले संस्थापक समूहवाट प्रतिनिधित्व गर्ने संचालक पदमा डा. रामहरि अर्याल, इश्वर कुमार कार्की, दिप चन्द्र रेग्मी,संजय अधिकारी साथै विज्ञ स्वतन्त्र सञ्चालकको रुपमा अश्विनी कुमार ठाकुरलाई निर्वाचित गरेको छ । त्यसपछि संचालक समितिको वैठकले डा. रामहरि अर्याललाई सर्वसम्मत रुपमा अध्यक्ष चयन गरेको छ ।